७ वर्ष ३ महिनापछि शीतल निवासबाट बिदा हुँदै यादव | कुवेतको पहिलो नेपाली अनलाईन पत्रिका
← विद्या बनिन् प्रथम महिला राष्ट्रपति
नयाँ राष्ट्रपति’bout विदेशी मिडियामा प्रश्न : नागरिकतामा महिलाविरोधी नीति लिएको आरोप →
७ वर्ष ३ महिनापछि शीतल निवासबाट बिदा हुँदै यादव
Posted on 29/10/2015 by शिव पौडेल | टिप्पणी छोड्नुहोस्
शीतल निवास छाड्दा मधेस शान्त होस् भन्ने चाहना थियो । सुन्न र सम्बोधन गर्न सकिने जायज मागप्रति बेवास्ता हुँदै आयो । यसप्रति निवर्तमान राष्ट्रपतिको मन खिन्न छ’
कार्तिक १२, २०७२- गणतान्त्रिक नेपालका प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादव ७ वर्ष ३ महिनापछि बिहीबार शीतल निवास छाड्दै छन् । दुई वर्षको कार्यकालका लागि ०६५ साउन ८ गते यादव राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका थिए । संविधान जारी गर्ने प्रक्रिया लम्बिँदै जाँदा उनको पदावधि पनि लम्बिँदै गयो र संविधान जारीसँगै बुधबार भएको निर्वाचनबाट विद्या भण्डारी राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि उनको बिदाइ पक्का भयो । पहिलो राष्ट्रपतिको इतिहास रचेर यादवले व्यक्तिगत रूपमा नचिताएको ठूलो सफलता हात पारे । शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनेदेखि संविधान जारी गर्ने अवसरसमेत उनैले पाए । यस्तो मौका जोकोहीलाई दुर्लभै प्राप्त हुन्छ । शीतल निवास छाड्दै गर्दा भने यादवको मन कुँडिएको छ । उनका प्रेस सल्लाहकार राजेन्द्र दाहालका अनुसार पछिल्लो समय यादवको असन्तुष्टि अघिल्लो र वर्तमान सरकारले मधेसको समस्यालाई प्राथमिकतामा नराखेकोप्रति थियो । यसमा यादवको गहिरो चित्तदुखाइ पनि छ । त्यही भाव लिएर उनी शीतल निवास छाड्दै छन् । ‘संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने २००७ सालदेखिको सपना पूरा भएको तथा शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुगेकामा खुसी हुँदाहुँदै पनि मधेस आन्दोलनले उब्जाएको समस्या हल गर्न बारम्बार घचघच्याउँदा सुनुवाइ नभएकामा दु:खमनाउ गर्दै यादवले शीतल निवास छाड्नुपर्ने अवस्था छ,’ दाहालले भने, ‘शीतल निवास छाड्दा मधेस शान्त होस् भन्ने चाहना थियो । सुन्न र सम्बोधन गर्न सकिने जायज मागप्रति बेवास्ता हुँदै आयो । यसप्रति निवर्तमान राष्ट्रपतिको मन खिन्न छ ।’ यादवले बुधबार व्यवस्थापिका संसद्मा राष्ट्रपति निर्वाचनको गतिविधि नियालिरहेका थिए । भण्डारी निर्वाचित हुनासाथ टेलिफोनबाट बधाई दिए । बधाई सन्देशमा उनले मुलुकको एकता र सामाजिक सदभाव मजबुत पार्न भण्डारीलाई शुभकामना पनि दिए ।
‘म तपाईंलाई राष्ट्रपतिको कुर्सी हस्तान्तरण गर्न प्रतीक्षारत छु,’ यादवको भनाइ उद्धृत गर्दै दाहालले भने । कसरी हुन्छ कुर्सी हस्तान्तरण ? नवनिर्वाचित राष्ट्रपति भण्डारीले बिहीबार अपराह्न ३ बजे शपथग्रहण गर्ने कार्यक्रम छ । शपथग्रहण समारोह शीतल निवास अगाडिको प्रांगणमा हुनेछ । शपथग्रहणमा पहिला भण्डारी पुग्नेछिन् । त्यसलगत्तै निवर्तमान राष्ट्रपति यादव आउनेछन् । यादवको सम्मानमा नेपाली सेनाले सम्मान गारथ अर्पण गर्नेछ । त्यसपछि शपथ ग्रहण सुरु हुनेछ । शपथ ग्रहणपछि नेपाली सेनाले भण्डारीलाई सम्मान गारथ अर्पण गर्नेछ । यादवले भण्डारीलाई राष्ट्रपतिको कुर्सी हस्तान्तरण गर्नेछन् ।
नयाँ राष्ट्रपतिलाई कुर्सीमा बसालेपछि उनी त्यहाँबाट बिदाई भएर शीतल निवास छिर्नेछन् । भण्डारीले निवर्तमान राष्ट्रपतिलाई उठेर बिदाइ गर्नेछिन् । बिदाइपछि भण्डारीलाई शुभकामना र बधाई दिने कार्यक्रम सुरु हुनेछ । त्यसको केही समयपछि शीतल निवासकै दक्षिणतर्फको बगैंचामा सरकारले आयोजना गरेको बिदाइ कार्यक्रममा यादव सहभागी हुनेछन् । त्यहाँ उनले सम्बोधन गर्नेछन् । सम्बोधनपछि भीभीआईपी सुरक्षासहित यादव बागडोल निवासतर्फ जानेछन् । यादवका लागि बागडोलमा सरकारले नै सुविधासम्पन्न घर व्यवस्था गरेको छ । भण्डारी भने केही दिनको तयारीपछि मात्रै शीतल निवास जाने कार्यक्रम छ । भूकम्पले क्षति पुगेकाले राष्ट्रपति बस्न शीतल निवासमा दुई कोठाको प्रिफ्याब भवन बनाइएको छ । यादव त्यसैमा बस्दै आएका थिए । अब के गर्लान् यादव ? निवर्तमान राष्ट्रपति यादवले अवकाशको समय सामाजिक काममा लगाउने योजना बनाएका छन् ।
चुरे संरक्षणप्रति उनको विशेष चासो छ । राष्ट्रपति हुँदा पनि चुरेको संरक्षणमा उनले विशेष जोड दिँदै आएका थिए । ‘भौतिक, भौगोलिक र सामाजिक रूपमा उत्तर र दक्षिणको सभ्यतालाई जोड्ने काम चुरेले गरेको छ । आधा जनसंख्याको खानेपानी, खेती प्रणाली र जीवनधाराको स्रोतसमेत चुरे हो,’ प्रेस सल्लाहकार दाहालले यादवको भावी योजना सुनाउँदै भने, ‘पदमा रहँदा पनि चुरेको स्रोतको संरक्षणका लागि आवाज उठाउँदै आउनुभयो । अवकाशपछि पनि प्रमुख प्राथमिकता यसैमा छ ।’ यादव सामाजिक सदभाव र राष्ट्रिय एकतालाई बल पुग्ने क्षेत्रका अन्य कामसमेत गर्ने योजनामा छन् । उनकी भतिजी किरण यादवले भनिन्, ‘कांग्रेसको राजनीतिमा रहँदा पनि उहाँको मुख्य काम समाजसेवा थियो । राष्ट्रपतिबाट हटेपछि मुख्य प्राथमिकता सामाजिक क्षेत्रै हुनेछ । कुन क्षेत्रमा गर्ने भन्ने’bout छलफल हुँदै छ ।’